Ogaden News Agency (ONA) – Tobanaan kun oo muslimiin Itobiya ah ayaa 7ba magaalo ka banaanbaxay shalay
Tobanaan kun oo muslimiin Itobiya ah ayaa 7ba magaalo ka banaanbaxay shalay
Posted by ONA Admin	/ April 13, 2013
Tobanaan kun oo muslimiinta Itobiya ah ayaa shalay salaadii Jimcaha ka dib isugu soo baxay masaajidda iyo wadooyinka. Banaabaxa shalay ayaa cinwaan looga dhigay –Cadaalad iyo 360 Maalmood Xoriyadda Darteed- oy ula jeedaan inuu sanad u dhamaaday Banaabaxayaasha ay ku dulbanayaan Xoriyad iyo cadaalad.
Magaalooyin badan ayaa laga banaanbaxay shalay waxaana ka mid ah magaalooyinka sida weyn looga soo baxay Adisababa oo Masjidka Anwar uu ka bilowday banaabaxa, Dessie, Awasa, dirdhaba, Bahir dar, Jimma iyo Gondar.
Sidaan la socono banaabxayaasha ayaa diidan faragalinta ay xukuumadda EPRDF ku hayso xoriyadda diinta iyo faragalinta qaawan ee diinta islaamka gaar ahaan ay ku hayso xukuumadda. Waxyaabah kalee ay dalbadeen dadkan isugu soo baxay waxaa ka mid ahaa in la soo daayo ergadii ka koobnaa culumada iyo aqoonyahanka ee muslimiinta ay u direen xukuumadda inay kala soo hadlaan cabashadooda oo xabsiga la dhigay. Itobiya ayaa waxaa dhaqan u ah in aanay xurmaynin ergada loo soo diro marka ay dalbato wadahadal.
Haya’ada badan oo xuquuqda aadanaha u dooda ayaa xukuumadda EPRDF ka codsaday inay ixtiraamaan xuquuqul insaanka oo si caadi ah ay ugu tuntaan. Haya’d Ameerikaan ah oo xuquuqda diimaha ilaalisa ayaa sidoo kale ku eedeeysay Itobiya inay cadaadin xoogan ku hayso dadka muslimiinta ah, taasoo ay ka digtay haya’adaasi inay abuuri doonto xasilooni darro.
Banaabxayada dadka muslimiinta ahh oo sanad jirsaday ayaa ka kacay markii xukuumadda Itobiya ay ku qasabtay inay noqdaan Majlisul-Aclaaga Itobiya koox sheegata inay yihiin Axbaash oo aaminsan madhabad ka soo horjeeda sunada, taasoo ay muslimiinta Itobiya oo suniyiin ah ay ka gadoodeen.